एक डीभिडीबाट लेजर कसरी बनाउने?
सम्भवतः सबैजना बचपनमा, एक लेजरको अस्तित्वबारे सिक्न, आफ्नो आफ्नै सपना सुरू गर्न, आफ्नो बाटो मा सबै कुरा काट्न सक्षम भयो: काठ, ढुङ्गा, इस्पात। निस्सन्देह, यो सपना सहि सक्न सकेन, किनकि शक्तिशाली व्यक्तिहरु लाई साधारण मानिसहरुलाई दिइने खतरनाक छ। यद्यपि, वर्तमान समयमा, कम्प्युटर प्रविधिहरू विकसित हुँदा, सबैले केही हदसम्म यो सपनालाई बुझ्न सक्छन्।
डीभिडीबाट लेजर एउटा सबै उपकरणको लागि उपलब्ध उपकरण हो जसले अनावश्यक (तर अझै पनि काम गरिरहेको) ड्राइभमा उपलब्ध छ। निस्सन्देह, प्राप्त "हतियार "ले कठिन सामग्रीमा हानि पुऱ्याउन सक्दैन, तर यहाँ कागज, गत्ता र यहाँसम्मका प्लास्टिकहरू पर्याप्त हुनेछन्।
तपाईंको हातमा डीभिडीबाट लेजर बनाउनको लागी, तपाईंलाई आवश्यक छैन: एक काम गर्दै (आवश्यक लेख) ड्राइभ, भोल्टेज capacitors, तारिङ, मोबाइल फोनको लागि एक ब्याट्री, एक मल्टीमिटर, एक अवरोध, एक सोल्डरिंग फलाम, एक सूचक, एक एलईडी टर्च। अनि निस्सन्देह, इच्छा, नि: शुल्क समय र मिलाउने क्षमता।
एक डीभीडी ड्राइभबाट लेजर बनाउन को लागी, तपाइँ यसलाई असक्षम गर्न आवश्यक छ। यो सम्झना गरिनु पर्छ कि केवल लेखन ड्राइभ डिजाईन को लागी उपयुक्त छ, किनकि अरुसँग पर्याप्त शक्ति छैन।
ड्राइभ छुट्याउन, यो लेजर डायोड यो फेला पार्न आवश्यक छ । यो सम्झना हुनुपर्छ कि त्यहाँ कुनै पनि ड्राइभमा दुई छन्: एक कमजोर (आईआर डायोड) छ, अर्को शक्तिशाली हो (लेजर रातो)। तिनीहरूको बीचमा भेद गर्न गाह्रो छ, तर यो सम्भव छ: एक लेजर बनाउन को लागी एक अधिक शक्तिशाली डायोड, डिस्क क्यारियरमा छ र ठूलो रेडिएटर छ।
यो ध्यान दिइन्छ कि लेजर डायोड हटाउन अघि, यसलाई एन्टिस्टेटिक कलाई पट्टा लगाउन सिफारिस गरिन्छ , किनकी यो (डायोड) स्थिर स्थिर बिजुलीको "डरलाग्दो" हो, जसले यसलाई नाश गर्न सक्छ। घटनामा कंगन उपलब्ध छैन र तपाइँ यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, तपाइँले पतली तारसँग लेजर तारहरू ल्याउनु पर्छ।
डायोड हटाउन पछि, तपाईंलाई चालक मिलाउन आवश्यक छ। यसको बिना, एक डीभिडीबाट लेजर ले संचालित गर्न आवश्यक पावर प्राप्त गर्न सक्दैन। चालकको लागि, दुई 0.1 र 100 माइक्रोन capacitors आवश्यक छ, एक अवरोध जसको वर्तमान शक्ति 16x, 18x, 20x, 22x र 24x को लागि क्रमशः 250, 300, 400, 450 र 500 मा आधारित हुन्छ।
जब यी तत्वहरू टाँस्दै र तारहरू टाढा र माइनसमा राख्नुहुन्छ, यसले ध्रुवतालाई भ्रमित गर्न महत्त्वपूर्ण हुँदैन, अन्यथा लेजर तुरुन्तै खराब हुनेछ।
यन्त्रलाई पावर गर्न, तपाईले ब्याट्रीको प्रयोग मोबाइल फोनबाट 200 देखि 300 एमए क्षमताको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, केहि लेजरहरूलाई ठूलो क्षमता चाहिन्छ।
साथै एए ब्याटरहरू वर्तमान स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि जाँच गर्न कि चालकले सजिलो तरिकाले मिलाएको छ कि छैन भने, यो ड्राइवबाट दोस्रो (कमजोर) डाइओडमा जडान गर्न आवश्यक छ र मर्ज गर्नको लागि बहुविध प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि सबै कुरा सही भएमा, तपाईं अन्तर्वार्ता ले डीभिडीबाट लेजर सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई मनपर्ने शरीरमा राख्नुहुन्छ। यन्त्रलाई लामो समयसम्म अर्डर गर्न, यो ग्लुको साथमा सबै तत्वहरू ठीक गर्न र तिनीहरूलाई छाप गर्न सिफारिस गरिन्छ।
डीभिडीबाट लेजर बनाउन सजिलो छ, तर तपाईंलाई यो प्रयोग गर्दा सावधान रहनुपर्छ। यो सम्झनु पर्छ कि यो क्षतिको कारण हुन सक्छ, र त्यसैले यो यो जानवर वा मान्छे लाई निर्देशित गर्न सकिँदैन। यदि तपाईं आँखामा आउनुभयो भने, लेजर बिग्रेको हुन सक्छ र दृष्टिको हानि पनि हुन सक्छ।
आयरन "बोस्च" - घरको लागि अयोग्य प्रविधि
डिजिटल क्यामेरा Canon PowerShot A3300 IS: निर्दिष्टीकरण, प्रयोगकर्ता पुस्तिका, समीक्षा
रूसी आंतरिक मंत्रालय गरेको अस्पताल "सलाम"। विवरण, सेवा,
फर्सी प्यानकेकहरू: फोटो संग नुस्खा
टर्की होटल नीलम - आफ्नो छुट्टी को jewel
Tagil संरक्षक व्लादिस्लाव Tetyukhin: जीवनी, काम
लगानीको जलवायु, यसको मूल्यांकन
घरमा एक लेबल कसरी बनाउने:5तरिका
सपना व्याख्या: Tulip। किन रातो Tulip को सपना?
प्रिस्कूल लागि बरफ संग प्रयोग। हिउँ र बरफ को गुण